Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Muhammad Khadir Musa Ramadan
Muhammad Khadir Musa Ramadan, waa hogaamiye sare oo dacaayadest muhiim u ah Dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo Suuriya (ISIS). Sidoo kale loo yaqaano Abu Bakr al-Gharib, Ramadan wuxuu ku dhashay wadanka Urdun (Jordan).
Ramadan waa mid ka mid ah saraakiisha ugu waqtiga dheeraa oo ISIS ug qaabilsan warbaahinta oo wuxuu kooxda ka haqabtiraa howlaha warbaahinta, oo ay ku jiraan maaraynta waxyaabaha ay kooxda ISIS u gudbiso shabakada taageerayaasha. Ramadan wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray barabagaandada howlaha tacadiga ah ee ISIS ay geysato inay xagjirsiiso, ay qorto, oo ay kiciso shaqsiyaad dunnida oo dhan ku baahsan. Wuxuu kor kala socday qorshaynta, isuduwida, iyo soo saarista fidiiyowyo barabagaando oo dhowr ah, war-isgaarsiin daabacan, iyo baro qatka interneetka ah oo ay la socdeen muuqaalo arxan darro ah iyo jir dil axmaqnimo ah iyo dilal badan oo loo geystay dad aan wax geysan. Iyadoo laga duulayo tacadigiisa xagjirnimada, wuxuu horseed u ahaa dadlaado lagu doonayo in ISIS laga nadiifiyo afkaarta dhexdhexaadka ah, in xabsi ladhigo xubnaha kooxda ISIS oo aan ka soo bixin ama aan rumaysnayn fekirkiisa foosha xun ee Islaamka.
Dawladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Suuriya (ISIS)